Messi Club – Page 61 – Just another WordPress site
သညျးမခံနိုငျတဲ့အဆုံး သူ့နောကျကှယျမှာ ခဈြသူကောငျမလေးရဲ့အရှုပျတျောပုံတှကေို သကျသနေဲ့တကှပွသလာခဲ့တဲ့ နဒှေေး
ပရိသတျကွီးရေ မငျးသာ နဒှေေးကိုတော့ အထူးအထှေ မိတျ ဆကျပေးစရာမလိုအောငျ ခဈြခငျရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါ တယျ.။ နဒှေေးက အောငျမွငျကြျောကွားတဲ့ အနုပညာရှငျတဈ ယောကျဖွဈပမေယျ့ သာမာနျလူလိုပဲ မထငျမရှားနထေိုငျတတျသူ တဈယောကျဖွဈပွီး သူ့ရဲ့အခဈြရေးအကွောငျးကိုလညျး ပှငျ့လငျးစှာ ခပြွတတျ သူပါ.။ လကျရှိမှာတော့ နဒှေေးက သူ့ရဲ့ခဈြသူ ကောငျမလေးရဲ့ သူ့အပျေါမှာ မကောငျးပွောဆိုကာ ဝဖေနျမှုတှကေို တဈလကြျော သညျးခံခဲ့ ပမေယျ့ ဒီကနမှေ့ာတော့ သူ့ရဲ့သညျးခံမှုတှအေကွောငျးကို အခုလိုပဲ ခပြွမှုတှကေို လုပျဆောငျခဲ့ပါ တယျ.။ Screenshot မြားနဲ့အတူ ခပြွမှုတှကေိုလုပျဆောငျလာ သူ နဒှေေး ရဲ့ တကယျ့အဖွဈမှနျပျေါရှငျးပွမှုတှကေို ပရိသတျကွီးအတှကျလညျး ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါ တယျ.။ Credit unicode ပရိသတျကွီးရေ မငျးသာ နဒှေေးကိုတော့ အထူးအထှေ မိတျ ဆကျပေးစရာမလိုအောငျ ခဈြခငျရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ […]
KTVသွားတဲ့ယောကျာင်္းကိုမိန်းမဖြစ်သူမှ စိတ်တို၍အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်တွင်… See more
Zawgyi KTVသွားတဲ့ယောကျာင်္းကိုမိန်းမဖြစ်သူမှ စိတ်တို၍အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်တွင်… See more မော်လမြိုင်တွင် KTV သွားသောယောက်ကျားအား မိန်းမဖြစ်သူမှ ဓားဖြင့်ထိုးလိုက်ရာ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ည 7:45 အချိန်ခန့် မော်လမြိုင်မြို့ ဒေါင်းဇရပ် တက္ကသိုလ်ဖြတ်လမ်း အဟောင်းရှိ နေအိမ်ဆောင်တွင် မိန်းမဖြစ်သူမှ KTV သွားတဲ့ ယောကျာင်္အား ဓါးနဲ့ထိုးလိုက်သဖြင့် ယောင်္ကျားဖြစ်သူမှာ ဓါးထိုးခံထိ (ပြင်းထန်) ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်။ ဘိုဘိုဝင်းRescue(EMR) အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှ လို့အပ်သည့်များပြုစုပေးပြီး မော်လမြိုင်ဆေးရုံကြီး OPD သို့ ကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့သော်လည်း လူနာမှာ ဆေးရုံOPD အရောက် တွင် ရရှိထားသော ဒဏ်ရာကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့ရာသဖြင့် ဘိုဘိုဝင်း Rescue အဖွဲ့မှ သေဆုံးသူ DB အားရင်ခွဲရုံသို့ဆက်လက်ကူညီပို့ ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ မှတ်ချက်-ဓါးထိုးဖြစ်စဉ်တွင် လူနာကအချိန်ကြာပြီးမှ သတင်းရ ကယ်ဆယ်ခွင့် ရခဲ့ဖြင်း ဖြစ်ပါသည်။ […]
ယောကျြားတဈခြို့ ဖောကျပွနျရတဲ့ အဓိကအကွောငျးအရငျး…
ယောက်ျားတစ်ချို့ ဖောက်ပြန်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်း… လောကမှာ အိမ်ထောင်သည် ဘဝရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးသတိထားရမဲ့အရာဟာ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းပါပဲ။ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းကို လူမှုအသိုင်းဝန်းနှင့် လူမှုဝန်းကျင်ကလည်း လက်မခံသလိုဆွေမျိုးသားချင်း အသိုင်းဝန်းကလည်း လက်မခံပါ။ သို့သော်လည်း ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်နေသည်ကို တွေ့နေရသည်၊ ကြားနေရသည်၊ မြင်နေရပါတယ်။ ဒီလိုအိမ်ထောင်ရေးဖတ်ပြန်ဖို့ရာ အဓိကကြတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့…… ၁။ သူစိမ်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အနေနီးစပ်ခြင်း။ ၂။ ဇနီးသည်နှင့် အနေဝေးခြင်း။ ၃။ မိမိမှာ ပုံမှန်ဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ် အကိုင်ရှိခြင်း။ ၄။ ရုပ်ရည် ရူပကာရှိခြင်း။ ၅။ ရာထူး ပါဝါ|အာဏာရှိခြင်း။ ၆။ စကားပြော လိမ္မာပါးနပ်ခြင်း။၇။မိန်းကလေးနဲ့ အားနည်းချက်ကို သိရှိခြင်း။ စသည့်အကြောင်းတရားတွေပေါ်မှာ အခြေခံပြီး အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်ကြတာများတတ်ပါတယ်။ သင့်မှာ ဘယ်လို့ အရည်ချင်းကောင်းတွေရှိနေပါစေ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်ဖို့ မစဉ်းစားပါနဲ့။ […]
အချစ်စစ် နှင့်တွေ့တဲ့အခါ အမျိုးသားတွေပြသတဲ့ အမူအရာ (၈) မျိုး
အချစ်စစ် နှင့်တွေ့တဲ့အခါ အမျိုးသားတွေပြသတဲ့ အမူအရာ (၈) မျိုး ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပြသတဲ့နေရာမှာ ယောက်ျားနှင့် မိန်းမ မတူပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တွေးခေါ်ပုံချင်းကွာလို့ပါ။ အမျိုးသားတစ်ယောက်က အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ချစ်ကြောင်းပြသတဲ့ အမူအရာတွေရှိပါတယ်။ ဘာတွေလဲကြည့်ရအောင် ၁။ သင်ပြောတာကို ဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးတယ် များသောအားဖြင့် အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေထက် နားထောင်စွမ်းရည်ပိုသာပါတယ်။ အရိုးသားဆုံးပြောရရင် တချို့အမျိုးသားတွေက နားထောင်စွမ်းရည်တော်တော်ညံ့တယ်ဗျ။ အမျိုးသားတွေကသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာကိုသာဂရုတစိုက်နားထောင်ကြတာပါ။ ဒါကြောင့် အမျိုးသားတစ်ယောက်က သင်ပြောတာကိုနားထောင်ပေးပြီး စိတ်ဝင်တစားရှိတဲ့အပြင် လေးလေးနက်နက်ပြန်ပြောတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ သူချစ်ရတဲ့သူလို့သာ သဘောပေါက်လိုက်ပါ။ ၂။ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံဖို့ဝန်မလေးဘူး ချစ်ရသူတွေအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ရမယ်ဆိုတာခက်ခဲတဲ့ အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တမ်းကျတော့ သူချစ်ရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေရင် နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ရတာက အမျိုးသားတွေပါ မင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံပေးခဲ့တယ် ဆိုတာက မင်းအတွက် သူ့ရဲ့အချစ်ကိုပြသတာပါ။ ၃။ သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုပြသတယ် အမျိုးသားတွေက သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကို […]
💓မကြာခဏရန်ဖြစ်တိုင်း FB/phone Block တက်သူများသာဖတ်ရန်💓…
💓မကြာခဏရန်ဖြစ်တိုင်း FB/phone Block တက်သူများသာဖတ်ရန်💓 💓မကြာခဏရန်ဖြစ်တိုင်း FacebookကိုBlock လိုက် ဖုန်းကိုBlock လိုက်နဲအဲလိုချစ်သူစုံတွဲတွေရှိလား….?။ ဒါဆိုရင်သေချာတာကတော့ အဲစုံတွဲတွေဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အရမ်းချစ်ကြတဲ့သူတွေဆိုတာလက်ခံပါသလား…?။💓 💓ဖုန်းခေါ်လိုမအာ်း သေချာပြီ ဒီနေ့ရန်ဖြစ်ရတော့မယ် ဆိုတာ။သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးနဲများဖုန်းပြောတာလိုပြောရင် သဝန်တိုပြီး ဖြေရှင်းမရ၊ပြသနာရှာတက်တဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်ရှိနေပြီလား၊ ဒါဆိုသင်ဟာအရမ်းကံကောင်းသူတစ်ယောက်ပါ။ သင့်အပေါ်သူအရမ်းချစ်တဲ့ သူမို့ပါ …။ စိတ်ဆိုးပြီးဖုန်းကို Block ထားပေမယ့် တခြားဖုန်းနဲ ဖုန်ပြန်ဆက်ချော့မှာကို မျော်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ သင့်ပေါ်စိတ်ဆိုးတိုင်း Block တိုင်သေင်ဘက်ကတခြားနည်းနဲ့ ပြန်ဆက်သွယ် ပြီးရှင်းပြပါ။💓 💓မကြာခဏ အကြိမ်ပေါင်းများစွာရန်ဖြစ်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဖုန်းပြန်ဆက် Messageပို့မှာမျော်နေတဲ့သူတွေဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အရမ်းချစ်ကြလိုဆိုတာ သင်ငြင်းပါသလား…?။💓 💓စိတ်ဆိုးတိုင်း စကားအကြမ်းတွေနဲတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အကျိတ်အနယ်ပြောပြီ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မဆက်သွယ်ဘဲ နေခဲကြပြီး မကြာပါဘူး ပြန်ဆက်သွယ်ပြီး ခုချိန်ထိ ရန်ဖြစ်ပြီးတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ခွင့်လွတ်ပြီးဆက်တွဲနေကြဆဲမလား။ ဒါဆိုသင်တိုနှစ်ယောက်ဟာတစ် ယောက်ကိုတစ်ယောက် အရမ်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့သက်သေပါ။💓 💓Onlineမှာ Active nowပြမီစိမ်းလင်းနေရင် စာမပို့ […]
ညီမလေး ဒီလိုယောကျြားမြိုးကို ပိုငျဆိုငျခှငျ့ရခဲ့ရငျ ည အိပျယာ ဝငျတိုငျးရှိခိုးပွီးအိပျ…
“တကယျခဈြတဲ့ ယောကျြားလေး ဆိုတာဒီလိုပါ” အနာဂါတျ အစီအစဉျ တခုခု သငျ့အတှကျ ကွိုးစားနပေါလိမျ့မယျ ►သဘောထားခငျြးမတိုကျဆိုငျတဲ့ကိစ်စတှေ ရှိနခေဲ့ရငျလညျး အတတျနိုငျဆုံး သငျ့ ဆန်ဒ ကို လိုကျလြောပေးတတျတယျ… ►အပိုငှကေုနျပေါကျတှေ အပြျောအတှကျ ငှကွေေးသုံးစှဲတာတှေ လြော့ပွီး သငျ့အတှကျ လိုအပျတာလေးတှေ ဖွညျ့စညျးပေးဖို့ အသုံးခတြတျပါတယျ… ►သုံးနကြေ Password ဖှငျ့ပွောပွတာမြိုး ရှိပါလိမျ့မယျ လြှိဝှကျခကျြဆိုတာ သူနဲ့သငျ့ကွားမထားတတျတော့ပါဘူး ►ဘာပဲလုပျလုပျ သငျ့ဆီက ခှငျ့တောငျး တတျပါတယျ….တခြို့ကိစ်စတှအေတှကျ အကွံဉာဏျ တောငျးတတျတယျ။ ►သငျနှဈသကျတဲ့ အစားအသောကျ (ဒါမှမဟုတျ)သငျနှဈသကျတဲ့ ပစ်စညျးတခုခု လမျးကွုံတှတေဲ့အခါ ဝယျလာပေးတတျတယျ။ ►သငျ အပွုအမူတိုငျးဟာ သူ့အတှကျ ခဈြဖို့ကောငျးနပေါလိမျ့မယျ။ ►စိတျဆိုးတဲ့အခါ ပွဿနာ ကို ပွလေညျအောငျပွောပွတတျတယျ ။သငျမှားနရေငျတောငျ တခါတလေ သူ့ဘကျက မာနကို လြော့ခထြားတတျပါတယျ ►သငျ […]
ခဈြသူကောငျလေး သငျ့ကို ရိုးမသှားပဲ အမွဲသတိရနစေခေငျြရငျ ဒါတှလေုပျပါ… လူတဈယောကျ အထူးသဖွငျ့ ကိုယျ့ခဈြသူက ကိုယျ့ကို လှမျးနေ၊သ တိရနတောမြိုးကို မလိုခငျြတဲ့သူမရှိပါဘူး။တဈခြို့ ကိစ်စတှဟော ဒီတိုငျး သမရိုးကနြညျးအတိုငျး သှားတာထကျ နညျး နညျးလေးဉာဏျ မြားပေး ဖို့ လိုပါတယျ..။သူ့ကိုယျ့အကွောငျး မစဉျး စားပဲ မနနေိုငျပဲ လှမျးနအေောငျ လုပျလို့ရတဲ့ နညျးတှရှေိပါတယျနျော.. (၁) ငွငျးပါ… လူတျောတျောမြားမြားက ခကျခဲတာကိုမှ ပိုကွိုကျပါတယျ။လူ တိုငျး ကတော့ ကိုယျခဈြတဲ့ သူနဲ့အတူရှိခငျြကွသူတှပေါ။တှမေ့ယျ ခြိနျး လို ကျတိုငျး ငေါကျခနဲ ထထိုငျပွီး ဖွဈနတောမြိုး မလုပျပါနဲ့..၊အမြိုး သမီးေ တျာေ တျာမြားမြားက ခဈြသူကခြိနျးလိုကျပွီဆိုရငျ မအားတာေ တာငျမှ အခြိနျဇယားတှကေို ရှပွေီ့း တှဖေို့ အရောကျသှားသူတှပေါ။ကိုယျက ခဈြလို့ ဒီလို […]
သင့်မွေးရက် ကပြောတဲ့ သင့်ဖူးစာရှင်/ သင့်ချစ်သူ အကြောင်း
အားလုံးဖတ်လို့ရအောင် unicode & zawgyi code နှစ်မျိုးနဲ့ တင်ထားပါသည်။ သငျဟာ…1ရကျနေ့ မှေးသူ ဖွဈရငျ.. သငျ့ ခဈြသူ ဟာ တတျတတျကွှကွှရှိမယျ ဖွတျထိုးဉာဏျ အလှနျကောငျးပွီး လူတဖကျသားကို ကူညီတတျမဲ့သူတြောကျဖွဈတယျ။သငျ့အတှကျဆို လိုခငျြတာဖွညျ့စညျးပေးမယျ့ သူဌေးကွီးတြောကျလိုပါပဲ… 2ရကျနမှေ့ေးသူ ဖွဈရငျ… သငျ့ ခဈြသူ ဟာ ကွငျနာယုယတတျတယျ။ သငျ့ကို အမွဲဂရုစိုကျတတျပွီး အနုပညာနဲ့ ပတျသကျရငျ ပါရမီပါသူတြောကျဖွဈတယျ။သငျ့အတှကျဆိုမမနေို့ငျတဲ့ပြျောရှငျမှုဒှေ ဖနျတီးပေးမယျ့သူတြောကျပါပဲ။ 3ရကျနေ့ မှေးသူဖွဈရငျ သငျ့ခဈြသူဟာ စိတျလိုကျမာနျပါလုပျတတျတယျ။ ဆရာကွီး လုပျရမှာကနြေပျပွီးအမှားလုပျမိရငျလညျး တောငျးပနျဖို့ဝနျမလေးသူတြောကျဖွဈတယျ။သငျ့အတှကျဆို အခကျအခဲတှကေို တူတူဖွတျကြျောမယျ့ လကျတှဲဖျောကောငျး တြောကျပါပဲ.။ 4ရကျနေ့ မှေးသူဖွဈရငျ… သငျ့ ခဈြသူ ဟာ စိတျနသေဘောထားကျွီးတယျ။ လကျတှေ့ အကောငျထညျဖျောလုပျဆောငျရမှ ကနြေပျသူတြောကျဖွဈတျတယျ။ သငျ့အပျေါ နညျးနညျးလေး အနိုငျယူရမှ […]
အ သကျ (၁ ၆) နှဈ မှ (၂ ၄) နှဈအ တှငျး မိနျးကလေး မြားသာ ဖတျရနျ (တဈခွားလူမဖတျရ)
အ သကျ (၁ ၆) နှဈ မှ (၂ ၄) နှဈအ တှငျး မိနျးကလေး မြားသာ ဖတျရနျ (တဈခွားလူမဖတျရ) ညီမေ လးရေ …. လှပတဲ့ မကျြနှာ တဈခုက တဈ ခြိနျ ကြ ရငျ အို မငျး သှားလိမျ့မယျ . . . . .။ စှဲမကျစရာ ခန်ဓာကိုယျ ကောကျကွောငျး တှေ က လညျး တဈခြိနျ ကရြငျ ပွောငျး လဲ သှားပါ လိမျ့ မယျ နျော . . .။ ဒါပမေယျ့ မိနျးမကောငျး တဈယောကျက တော့ တဈခြိနျ ကရြငျ […]